Ityala lefowuni, ukutshaja intambo, amandla eselfowuni- iNUEVASA
Umculo omtsha Nandipha i-Headset ye-Headset-S9 XR
UMculo oMtsha uyonwabele i-Headset-C500 Plus
Imodeli yentloko yestereo-ModelC3
IPhone 11 Pro ine-IMD engaphantsi enye kunye nee-anti-Shells ezintathu
I-Kei Shadow Generation IP 11 Pro Max CD Printa
Ngenyameko khetha izixhobo zemveliso.
Ukufezekisa zonke iinkcukacha zemveliso.
Kuya kuba lixabiso onelisekile ngalo.
Iimakethi zivulwe kwi-Yiwu
Emva kokuvulwa kweemarike ezinkulu ze-web, ngakumbi nangakumbi usaziwayo kwiwebhu usasazo ngqo kwimarike, abanye abanini-venkile, abancedisi beevenkile ngqo emfazweni, abarhwebi baba ziankile, usaziwayo kwiwebhu usasaze ngqo "ubambe" ishishini, kuba ...
Umgaqo-nkqubo wokuqinisekisa ubhubhane kumashishini ukuze aqhubeke nomsebenzi kunye nemveliso kwi-yiwu kurhwebo lwedolophu kwisixeko se-2020
Njengokuba i "yesebe elincinci lesizwe eligcina ulwandle olunzulu" utshilo isixeko se-yiwu, ngaphambi kokukhutshwa ngokusesikweni kokuqala kwemveliso, isixeko i-yiwu isixeko kurhwebo lwamanye amazwe sikwabhengeze ukuvulwa kwemarike yemasheya, i-zone 1, indawo yesi-2 ine-st nje ...
I-China Yiwu yeZizwe ngeZizwe yoRhwebo
Umboniso wase China yiwu wezentengiso zamanye amazwe (emva koku obizwa ngokuba yi "expo") wasekwa ngo-1995, wavunywa libhunga likarhulumente lokusetyenziswa kweentlobo zemiboniso mihla le, exhaswa ngumphathiswa wezorhwebo, ...
Ngo-2005, Yiwu Yitian technology co., Ltd. yasekwa e Yiwu, kwiphondo Zhejiang, nto leyo iziko lonikezelo lwehlabathi amashishini amancinci. Ngophuhliso lweshishini, i-Yiwu Leixin yorhwebo co., Ltd. yasekwa ngokusesikweni ngo-2017. Inkampani oko yasekwayo, ihlala ithobela umgca wophawu lwentengiso, izama ukwakha inkqubo ngokuhambelana nokusinda kwayo kunye nophuhliso, yomeleza ulawulo lwangaphakathi ngokungqongqo, ukwanda kwamanye amazwe kuphucula imigangatho yenkonzo…
Ngo-2005, Yiwu Yitian technology co., Ltd. yasekwa ngo Yiwu.
Ukuvuleleka, ukubandakanya wonke umntu, ukuzithemba kunye nokungena ngaphakathi zizimbo zethu zomzimba.
Sijonge phambili kwintsebenziswano yakho.